Iyo Yepamusoro Casino Mitambo - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Iyo Top Casino Games
Posted on August 6, 2018 August 7, 2018 munyori Andrew	Comments Off pane Iyo Pamusoro Bhasino Mitambo
Kubheja kwave kuri chikamu chepfungwa dzevanhu kwemazana emakore; zvisinei kuti iri duku shoutter kana dambudziko repamusoro, pane chimwe chinhu chinokwevera vanhu kune nyika yekubheja. Munguva iyoyo, mitambo yakasiyana-siyana yakave yakagadzirwa, imwe neimwe inounza mufaro mutsva uye mufaro, uye mukana wakawedzerwa wokukunda. Kunyange zvazvo mitambo yemuIndaneti iri zvishoma nezvishoma asi ichikwanisa kupindira pamakasitositi, hapana kukanganisa kuti hotspots yakafanana neLas Vegas inoramba iine ruzha rwekushanyirwa, uye makasinos kuona mamiriyoni evatambi gore roga roga. Ndeipi mitambo yakanakisisa, zvisinei? Pasi pane zvitatu kuti uone.
Arguingly mumwe weanozivikanwa macasino mitambo poker. Kutanga kuridzwa mu1829 muNew Orleans, mutambo uyu wakakura mukuzivikanwa mumakumi emakore. Nhasi uno unoonekwa semutambo mukati meUnited States, uye kunyange ine yayo chaiyo World Series uko vakwikwidzi vanobhadhara hefty $ 10,000 yekupinda mubhadharo, neyakavharwa pane main TV uye media. Iyo inonakidza "chero munhu anogona kuhwina" mantra yePoker ndiyo inokwevera vatambi nguva uye nguva zvakare nekuwanikwa kwemakinino epamhepo kubvumira vanhu vazhinji kuedza rombo ravo. Kune akasiyana siyana ePoker, neTexas Hold 'Em iri kutoridzwa zvakanyanya. MuTexas Hold 'Em, kune mana kutenderera mabheti, nevatambi vanoda kusanganisa mashanu emakadhi kuruoko rakanakisa. Nehunyanzvi hwekuchinja zuva rega rega, ikozvino kune nzira dzakawanda kupfuura dzakamboita yekutora chikamu mumutambo wePoker, senge Bitcoin Poker. Panzvimbo pokutengesa mari yako yakaoma-yakagadzirirwa, danda rinotora panzvimbo panzvimbo yeimwe nzira inofadza.
Kana iwe wakaona chero terevhizheni kana temafirimu inoitika mukati mekaseti, iwe uchaona tafura ye Roulette, ine gumbo rayo, mauto, uye tafura refu. Ndiyo imwe yemitambo yekambani yekutanga, inotanga mu18th Century France. Ndiyo mutoo unopisa, uye ane matanda akakwirira kupfuura Poker, asi ndizvo izvo vamwe vatambi vanoona zvakanyanya kufadza. Iyo pfungwa haina nyore; iwe unoisa bheji yako pane rumwe ruvara kana nhamba, kana kuisa (akadai sekuti 'Even'), mutengesi anobva avhara bhora, uye kana ikaenda pane nhamba / marara / seti yakaenderana nebheti yako, unokunda. Roulette inotora vatambi sezvinoitwa mutambo wepabonde, apo iwe unobatana nevamwe vatambi uye mutengesi, uye kufara kwokuti bhora richawa kupi. Inokurumidza kufamba-famba, yakakurumidza kupfuura mamwe mitambo yekaseino yakadai seKomer, zvinoreva kuti kugutsikana kunomhanya apo iwe unokunda. Roulette yakanaka kune vanotangisa kuCasino, sezvo iri imwe yezvinhu zviri nyore kutora uye kuedza.
Chimwe chifananidzo chinonyangadza kubva kumakositasi emazuva ano, mitsara yakajeka-mavara, inopenya, yakaita-slot-slot machines. The draw of slots machine pakupedzisira unoreva nechokuti iwe unogona kutamba nebhadhiro yakaderera zvikuru, yakadai se $ 1 panguva imwe, uye zviri nyore kwazvo. Iwe unongoisa mari yacho kuti utange mutambo, unogona kubva pamitambo yemavhidhiyo kusvika kune slot machines apo iwe unoda kusundira zvakasiyana-siyana zvebhatani kuti uhwine. Mubhadharo kubva kumashini ekugadzira zvingave wakakura, zvichienderana ne $ 10,000's.
130 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa LeijonaKasino Casino
20 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing bhonasi pa cyber Club Casino
150 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa Swanky Bingo Casino
50 asunungure hapana dhipoziti bhonasi pa All Star cheap car insurance Casino
105 kusunungura hapana dhipoziti bhonasi pa Royal Ace Casino
20 kusunungura hapana dhipoziti bhonasi pa PrimeSlots Casino
85 hapana dhipoziti bhonasi pa TouchLucky Casino
120 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Thebes Casino
70 vakasununguka hapana dhipoziti Casino bhonasi pa Fortune manyemwe Casino
80 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi at.dk Casino
165 kusunungura hapana dhipoziti bhonasi pa BetChain Casino
35 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing bhonasi pa Hello Casino
20 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso pa AllBritish Casino
145 hapana dhipoziti bhonasi pa Buzz cheap car insurance Casino
100 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa Real Vegas Online Casino
100 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa norja Casino
175 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso pana Malibu Club Casino
15 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Norgesspill Casino
105 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa vanakidzwe Casino
125 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing pa Nezvakawanda Jackpots Casino
155 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Malibu Club Casino
140 hapana dhipoziti Casino bhonasi pa Blu Casino
115 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing bhonasi pa Nezvakawanda Jackpots Casino
90 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso playing bhonasi pa Pocket Vegas Casino
130 akasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso bhonasi pa Jackpot Mobile Casino